အမြင်ချင်း တူတာမတူတာက တပိုင်းပေမဲ့ အရင်တုန်းက ဒီလိုအရေးအသားမျိုးတွေကြောင့် နေ့စဉ်ဝင်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့တွေထဲမှာ ကိုပေါဘလော့က ထိပ်ဆုံးက ဖြစ်နေခဲ့တာပါ..။ အချိန်ရလို့ ပို့စ်အသစ်တင်မယ်ဆိုလဲ ဒီလိုအရေးအသားမျိုးတွေဘဲ မျှော်လင့်ပါရစေ..။ ထောက်ပြဝေဖန်ခြင်းနဲ့ လှောင်ပြောင်စော်ကားခြင်းကြားက ကွဲလွဲတဲ့အရသာကို စာဖတ်သူတွေ ခံစားတတ်တယ်ဆိုတာလေး သတိရပေးပါ..။
အင်း.. လူတွေကိုက တုံးပါတယ်။ ကိုပေါမြင်သလို သိသလို ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး။ မြန်မာပြည်တပြည်လုံး ကို ကိုပေါ သတိပေးနေလို့ သာ။
ကိုပေါရဲ့ ပို့စ တွေကို အမြဲလာဖတ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်း ကိုပေါကိုဝိုင်းဆဲ နေတဲ့အချိန်မှာလဲ
လာဖတ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဆို တာလွတ်လပ် စွာသဘောထားကွဲလွဲခြင်း ရှိခြင်း နဲ့ကွဲလွဲတဲ့
သဘောထားကိုလွတ်လပ် စွာတင်ပြ ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း ဆိုတဲ့ သဘောကိုအတော်များများက သတိ
မမူ ဂူမမြင် ဖြစ်နေကြပုံရပါတယ်။
ကိုပေါဖက်ကလဲ အန်တီစုလို အများလေးစားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက် ကို ချက်အောက်ပိုင်း
အပေါစားသရော် စာမျိုးနဲ့ ဝေဖန်သရော်တယ်ဆိုရင်တော့ စည်းကျော်သွားလို့ အဆဲခံထိုက်တယ်လို့
ဒါပေမဲ့ မြန်မာတွေအွန်လိုင်း မှာဆဲချင်တိုင်းဆဲနေတဲ့ အကျင့်လဲပျောတ်စေချင်ပါပြီ။
ကွန်ပြူတာသုံးတတ်တယ် ဆိုကတည်းက အခြေခံက ပညာက သိတ်မတိမ်လောက်ပါဖူး။
ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ဆွေးနွေးကြရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တာပဲ။ကျွန်တော်တို့ က နအဖ တို့
၂၀၁၁ ခုနှစ်ကသတင်းတွေကို နားထောင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အိမ်မက်တခုမက်ခဲ့ပါတယ်......
၂၀၁၂ ခုနှစ် နှစ်သစ်မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်လာလိမ့်မယ်...ပြည်တွင်းကအတိုက်အခံအဖွဲ့ အစည်းတွေရော
ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးရော..နိုင်ငံတကာနဲ့ ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့ 
တွေကရော ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုကြမယ်...အစိုးရကိုလည်းဝိုင်းပြီးချီးကျူးကြမယ်...
IMF အပါအဝင် နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလည်းလှိမ့်ပြီးဝင်လာလိမ်.မယ်...နိုင်ငံရေးတွေတည်ငြိမ်လာလို့ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေစီးဝင်လာ...ပြည်သူတွေအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပွင်.လင်းလာ..စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေပြီး စားဝတ်နေရေးချောင်လည်လာမယ်..ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းမှာ
အရှေ့ တောင်အာရှရဲ့ ကျားတကောင်ဖြစ်လာမယ်...နိုင်ငံခြားသွားရင်လည်း ပတ်စပို့ နီနီလေးကိုလူလူသူသူဆက်ဆံကြမယ်...စသည်ဖြစ်..စသည်ဖြစ်....
ဒီနေ့ မနက်သတင်းတွေဖတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အိမ်မက်တွေ
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လုပ်ပုံကိုင်ပုံကို အရပ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့
ဝေဘန်ရယင် ...........(မိုက်ရိုင်းစွာ ဝေဘန်ပါမယ်)
ယုံကြည်စိတ်ချစွာပေါင်းသင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးကို
အိပ်ဆေးခတ် မုဒိန်းမှုကျူးလွန်တဲ့ လူယုတ်မာ ဇာတ်လမ်းမျိုး
ပြည်သူပြည်သားတွေက ငါတို့နိုင်ငံတော့ တိုးတက်တော့မယ်ဟဲ့လို့
ခုတော့ အိပ်ဆေးခတ် မုဒိန်းကျင့် ခံလိုက်ရဘီ
ဒီလိုပါပဲ။။။ ကစားဦးမှာပါ။။ ကျွန်တော်တို့တွေက နွားကို ပလာတာစားမယ်ထင်တာကိုး။။ နည်းနည်းလျှာရှည်ချင်ပါတယ်။။
သူ တို့ကို ယှဉ်ပြီး ကစားနိုင်တာ ၊ ကစားနိုင်တဲ့ ပါဝါရှိတာ အန်တီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီ ပဲရှိတာပါ။။။ အဘ ဦးစိန်ဝင်း တို့ အပေါင်းအပါ များ ဝန်းရံ သင့် ပါတယ်။။ အဘရေးတဲ့ ( "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီက အခုအခါ အတိုက်အခံပါတီ မဟုတ်တော့ဘဲ၊ အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ မောင်နှမပါတီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ သာမန်ပြည်သူများမှာ သတင်းမီဒီယာတွေပဲ အားကိုး အားထားပြုပါတော့တယ်။" ) ဆိုတဲ့ အသုံးအနုံးမျိုး ဟာမှားနေသလို ရှောင်ပြီး ရေးသင့်ပါတယ်။။။
တောအုပ်ကို မကြည့်ပဲ သစ်တပင် ချင်း လိုက်ကြည့်ရင် ဘယ်နေရာမဆို အပြစ် တွေ့ နိုင်တာပါပဲ။။။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပွန်း လေးတွေလို နေ ပြီး အန်တီ ကို ဝန်းရံကြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။။။
ခုအစိုး ရက လျှော့လိုက်တင်းလိုက် နဲ့ကစားနေတာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့အသံနဲ့ Media တွေကြောင့်ပဲလို့ ထင်ရင် လုံးလုံးကြီးမှား ပါလိမ့် မယ်။။။ 30% လောက်တော့မှန်နိုင်ပါတယ်။။ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ ရပ်တည်ဘို့တောင် ခက်ခဲ နေပြီဖြစ်တဲ့ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ Sanction ရုပ်အောင် ကြိုးပမ်းမှူတွေပါ။။။တိုင်းပြည် ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ချင်ပေမဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းလဲမရှိ နေရာပျောက် လဲမခံနိုင် နဲ့။။။ ဦးသိန်းစိန် ၊ ဟီလာရင် ကလင်တန်နဲ့ တွေ့ တုန်းကပြော လိုက်တဲ့စကားတခွန်း အပေါ် တွေးမိတယ် ဗျ။။။ "မိုးရွာတုန်း ရေခံ " ဆိုတာ ပါ။။ အားလုံးကဘယ်လိုထင်လဲ မသိဘူး ကျွန်တော်တော့ "( ခင်များတို့ တွေ ကျုပ်တို့ လက်ခံတုန်း Sanction တွေရုပ်ပြီး လာပေါင်းနော်၊၊ မဟုတ်ရင် တရုပ် ကိုနေရာပေးလိုက်မယ်လို့ပြောချင်တာလို့)ထင်ပါတယ်။။။ (ဘာတွေဘယ် ရောက်ကုန်ပြီ မသိ တော့ဘူး) ပြောချင်တာတော့ဗျာ ၊ PUblic & Media ကိုအစိုးရက ဂေါင်းထဲ မထားဘူးဗျိုး။။။
Who is "မင်းကိုနိုင်"?
Had he agreed to work with Daw Su, he would have been free by now.
.နိုင်ငံတကာနဲ့ ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့ တွေကရော ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုကြမယ်..
Yes foraweek or two, next weeks they will demand another thing.UN is notastake holder for Burma.
Investment is nothing to do with politics, China and Vietnam are getting more investment than some electoral democratic countries.
Yes if there will be no major protests disrupting businesses, so your two arguments contradict.
အရှေ့ တောင်အာရှရဲ့ ကျားတကောင်ဖြစ်လာမယ်.
Who says so again? .နိုင်ငံခြားသွားရင်လည်း ပတ်စပို့ နီနီလေးကိုလူလူသူသူဆက်ဆံကြမယ်.
Nothing to do with democracy,
it is economy and affluence!
your arguments are pipe dreams.
SOE HTET said...
လာဖတ်သွားတယ်ဗျာ။ မခိုင်မာတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားရယ် သဗ္ဖေသတ္တာကံမသကာ ..နှလုံးမသွင်းနိုင်တဲ့ အတ္တဘော တွေမြင်နေရဦးမယ်ဗျာ.. ဒါအသေအချာပဲ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းကြီးရေ..။